I-Fedora Silverblue: Uhlelo Lokusebenza Olungaguquguquki Lwe-Desktop | Kusuka kuLinux
Ukufaka kwe-Linux Post | 23/09/2021 06:00 | Kubuyekezwe ku- 23/09/2021 12:17 | Ukusatshalaliswa, I-GNU / Linux
Njengoba nje sathembisa esikhathini esifushane esedlule, eposini lethu elibizwa ngokuthi «Iphrojekthi yeFedora: Ukwazi Umphakathi Wakho kanye Nentuthuko Yayo Yamanje«Namuhla sizongena kwelinye lamaphrojekthi noma intuthuko yalo, ebizwa "UFedora Bluesilver".
"UFedora Bluesilver" ifuna ukuba a Uhlelo Lokusebenza Olungaguquguquki (aluguquki) kumakhompyutha okumele abe izindawo zokusebenza ku-GNU / Linux futhi kufanele isetshenziswe ngochwepheshe, ikakhulukazi abathuthukisi nabanye abahlobene neComputer Science, ngenxa yokusekelwa kwayo okuthuthukile maqondana nokusetshenziswa kwe- iziqukathi.
Kulabo abanentshisekelo yokuhlola injabulo okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene con iFedora Project nokudalwa kwayo okuhlukahlukene, ungachofoza kusixhumanisi esilandelayo, ngemuva kokuqeda ukufunda le ncwadi:
"Iphrojekthi yeFedora ingu-uIpulatifomu yomthombo omusha, yamahhala nevulekile yehadiwe, amafu neziqukathi ezenza abathuthukisi be-software kanye namalungu omphakathi ukuthi bakhe izixazululo zenkambiso zabasebenzisi babo. Ngamanye amagama, kungumphakathi wabantu abasebenza ngokubambisana ukwakha ipulatifomu yomthombo ovulekile nomthombo ovulekile, nokubambisana nokwabelana ngezixazululo ezisetshenziswa ngabasebenzisi ezakhiwe kuleyo pulatifomu. " Iphrojekthi yeFedora: Ukwazi Umphakathi Wakho kanye Nentuthuko Yayo Yamanje
1 I-Fedora Silverblue: Ilungele ukugeleza kokusebenza okugxile esitsheni
1.1 Yini iFedora Silverblue?
1.3 Ukwazisa komuntu siqu
I-Fedora Silverblue: Ilungele ukugeleza kokusebenza okugxile esitsheni
Yini iFedora Silverblue?
Kokuthunyelwe kwangaphambilini mayelana ne- "Iphrojekthi yeFedora", sikusho kafushane lokho "UFedora Bluesilver" es:
"Ideskithophu yokusebenza engaguquki (engaguquguquki) yedeskithophu ehlose ukuhlinzeka ngokusekelwa okuhle kokugeleza kokusebenza kwe-container-centric. Lokhu okuhlukile kweFedora Workstation kuhlose imiphakathi yonjiniyela."
Kodwa-ke, yize kunjalo uhlamvu lokungaguquguquki, kufanele kuqashelwe ukuthi empeleni:
"Okuhlukile kweFedora Workstation. Futhi-ke kubukeka, kuzwakale, futhi kuziphathe njengohlelo olujwayelekile lokusebenza kwedeskithophu, futhi isipiliyoni siyefana nesitholakale kusetshenziswa isiteshi sokusebenzela esijwayelekile seFedora."
Nokucacisa lokho, lapho kukhulunywa ngokungaguquguquki kwe- "UFedora Bluesilver" kubhekiselwa ku:
"Ukufakwa ngakunye kweFedora Silverblue kuyefana nokunye ukufakwa kwenguqulo efanayo. Uhlelo Lokusebenza olukudiski luyefana ncamashi kusuka komunye umshini luye komunye, futhi alushintshi ngenkathi lusetshenziswa."
Phakathi kwezici zayo eziphawulekayo singabala okulandelayo:
Idizayini engaguquki yokuqina okwengeziwe, iphutha elincane. Futhi-ke kulula ukuhlola nokuthuthukisa.
Ipulatifomu enhle kakhulu yezinhlelo zokusebenza eziqukathiwe, kanye nokuthuthukiswa kwesoftware esuselwe esitsheni.
Izinhlelo zakho zokusebenza (izinhlelo zokusebenza) neziqukathi kugcinwa kwehlukile kusistimu yokusingathwa, kuthuthukisa ukuzinza nokuthembeka.
Ukuvuselelwa kwabo kuyashesha futhi akukho ukulinda ukuthi bafake. Ukuqala kabusha ngokujwayelekile kwanele ukujabulela inguqulo elandelayo etholakalayo noma ubuyele kunguqulo yangaphambilini yayo, uma kunesidingo.
Ngeminye imininingwane nge "UFedora Bluesilver" ungavakashela i- isigaba sokulanda mayelana "Iphrojekthi yeFedora". Futhi mayelana neyakhe isigaba esiyinhloko esisemthethweni ngokulandelayo isixhumanisi. Lapho kuningi khona imibhalo iyatholakala ikakhulukazi ukufakwa nokusetshenziswa. Futhi mayelana imininingwane yezobuchwepheshe ngayo ifinyelela ukungaguquguquki kwayo nobuchwepheshe obusetshenzisiwe Ibhokisi lamathuluzi ephatha ngayo ukusetshenziswa kweziqukathi, ukuze kuzuzwe ukuqonda komhlaba wonke nokujula kwentuthuko eshiwo.
Ukwazisa komuntu siqu
Impela, "UFedora Bluesilver" kuyindalo enhle yalabo basebenzisi abadinga njalo dala / faka / shintsha / hlola izinhlelo zokusebenza nezinhlelo ku-Operating System yakho. Kusukela, ukukwazi ukwenza njalo lezi zenzo ngaphandle kokwesaba noma ukukhathazeka ngazo shintsha kabi noma ulimaze uhlelo olusebenzayo esetshenzisiwe, empeleni iyi- plus eliyigugu uma kukhulunywa ngomsebenzi noma imisebenzi ebalulekile.
Y "UFedora Bluesilver" kungenza ngicabange kakhulu, mayelana Izimpendulo (Izithombe ezibukhoma nezifakekayo) yenziwe ngamanye ama-GNU / Linux Distros afana MX o I-AntiX.
Njengoba, ngokuya ngokufakwa, umphumela wokufaka i-Respin uhlala ufana. Okungukuthi, ikhophi ngqo yohlelo olwakhiwe. Futhi yize zingaguquki, zivumela ukufakwa okusheshayo kusuka ku-ISO okwenziwe ngomfanekiso nangokufana kohlelo lwethu lokusebenza. Ukuvumela ukuba nayo noma ukuyibuyisela njengoba sifuna njalo ukuyisebenzisa.
Ngokufingqa, "UFedora Bluesilver" Okwamanje kungenye yendalo ethakazelisa kakhulu ye- "Iphrojekthi yeFedora". Njengoba, ifuna ukuba ngokweqile uzinzile futhi unokwethenjelwa njengoba Uhlelo Lokusebenza Lokusebenza, ikakhulukazi kulabo ochwepheshe onjiniyela, kanye nalabo abasebenzisa ukugeleza komsebenzi kugxile iziqukathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » I-Fedora Silverblue: Uhlelo Lokusebenza Olungaguquguquki Lwe-Desktop
Indatshana enhle kakhulu
Ngingumsebenzisi weSilverblue futhi impela, akufani nokusebenzisa i-distro ejwayelekile. Indlela yokuyiphatha iyehluka ngokuphelele futhi ngicabanga iSilverblue ikusasa le-linux distros;
Ngiyabonga ngale ndatshana echazwe kahle
Ngiyabingelela, Paul. Ngiyabonga ngokuphawula kwakho futhi ngijabule kakhulu ngokuthi ukuthandile. Angikwazanga ukuyisebenza ku-MV, ukuyivivinya ngokuqhubekayo. Ngicabanga ukuthi ayisebenzi ku-MV, akunjalo?
Sawubona, angikaze ngiyifake ku-MV. Nginama-pc amaningana futhi kokunye ngine-blueblue….
Yize uma ngifunde ngezinkinga ngemishini ebonakalayo, angazi noma ufuna ukuyenza ibe yinhle yini kumabhokisi, kepha lapha ku-YouTuBe umuntu ufaka i-silverblue ayenze isebenze, angazi noma ufuna ukubheka bese ubona ukuthi kuyakusebenzela yini: https://www.youtube.com/watch?v=AeNKlIizUFc
Ukubingelela okuvela eColombia
Ngiyabingelela, Paul. Siyabonga ngokuphawula kwakho nangokunikela kwakho. Zama futhi nge-VirtualBox ngokulandela imiyalo kuvidiyo futhi ungasebenzisi lutho. Ngemuva kwalokho ngizozama Amabhokisi.
Insiza ye-Epic Games 'Easy Anti-Cheat manje isiyasebenza neLinux neMac